Waxyaabo Fudud Oo Muhiim U Ah Sawirka Iyo Sawirada | Abuurista khadka tooska ah
Plugins-ka ay waajib tahay inay yeeshaan Sawireyaasha iyo Photoshop
Manuel Ramirez | | muujiye, Photoshop
Waxaa jira waxyaabo badan oo fiilooyin ah, laakiin waa inaad isweydiiso kuwaas oo noqon kara kuwa lagama maarmaanka u ah inay waqtiga naga badbaadiyaan oo noqo mid wax soo saar badan si aan uga faa iideysano shaqadeena marka aan lajirno barnaamij sida Sawiraha ama Adobe Photoshop.
Waxaa jira liis dheer oo iyaga ka mid ah, iskuna dayi maayo inaan halkan ka helo waxyaabaha ugu fiican ee Photoshop ah, sida naqshadeeye kasta oo garaaf ah ayaa laga yaabaa inuu leeyahay baahidiisa gaarka ah, iyo waxa u qalmi kara mid, tan kale waxaa laga yaabaa inaanay sidaa u baahnayn oo muhiim ahayn.
3 Subscribe dheh
4 Qiyaasta saxda ah
5 Qaabab khiyaali ah
Qalabkaan waa lacag la’aan waana iyada waxaad si dhakhso leh uga heli kartaa dhammaan astaamaha taas oo loo baahan yahay iyada oo aan loo baahnayn in laga baxo deegaanka laftiisa, oo ah Sawire ama Photoshop. Hab fudud oo lagu ilaaliyo waqtiga adigoon ka bixin barnaamijka naqshadeynta aan jecel nahay.
Kordhin loogu talagalay Adobe Photoshop oo u oggolaanaya si fudud u hagto hageyaasha iyo rakhiisyada dokumenti ama xulasho. Shaqadan ayaa lagu daray Photoshop CC usbuucii hore. Markaa waad badbaadin kartaa naftaada rakibidda, in kastoo kuwa kale laga yaabo in loo baahdo.
Plugin for Illustrator wuxuu u noqon karaa aalad aan la bedeli karin naqshadeeye kasta oo sameeya doonaya in la abuuro sawiro faahfaahsan. Waqtigan xaadirka ah waa bilaash, markaa waqti badan ha ku qaadin inaad tijaabiso.
Qiyaasta saxda ah
Qalab muhiim ah oo loogu talagalay isku dheellitirka Photoshop. Cabbir sawirada ilaa 1000%.
Haddii aad isku aragto inaad u baahan tahay helitaan qaabab tayo sare leh, Qalabkaan loogu talagalay Photoshop wuxuu noqon karaa midka adiga kugu habboon.
Qalabka loogu talagalay Photoshop isku midka ah. Si fudud loo isticmaalo loona isticmaalo madadaalo wanaagsan waxaadna badbaadin doontaa waqti badan adoo abuuraya iskumid qumman.
Adigoon ka bixin deegaanka Laga soo bilaabo Photoshop ama Sawirqaade waxaad ka heli kartaa xirmo badan oo astaan ​​ah. Dhammaantood waxay ku hoos jiraan liisanka Creative Commons 3.0.
Xulasho fiican soo saar oo daabac jooniska iyada oo aan loo baahnayn in laga tago Sawiraha wakhti kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Plugins-ka ay waajib tahay inay yeeshaan Sawireyaasha iyo Photoshop